Yusuf Garaad: Isteerinka Arrimaha Dibadda Soomaaliya
"Wada Tuute noqannaye,
ha u rido tumaatida".
Waa laga soo gudbay xilligii ku meel gaarka, inkasta oo weli xagga dib u heshiinta iyo dib u dhiska hey'daha Dowladda siiba ciidanka ay wax badani ka dhimman yihiin.
Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada waxaa ka dhexeysa wadashaqeyn fiican xagga siyaasadda iyo xagga amnigaba. Khilaafna kama jiro Arrimaha Gudaha ee dalka. Arrimaha Dibaddana go'aankeeda waxaa leh Madaxweynaha Jamhuriyadda iyo Xukuumadda Federaalka.
Posted by Yusuf Garaad at 22:34:00